I-Dog Friendly Cottage entliziyweni yeCotswolds
ICoates Mill Cottage yipropathi enesitayile eneminyaka engama-200 ubudala yaseCotswold enegadi enelanga kunye nendawo yokupaka yabucala. Ilele kwindawo ezolileyo, ekupheleni kwethafa, inomsinga wokusila ojongene nawo. Ubume bendawo yasemaphandleni buphikisana nento yokuba kukuhambo lwemizuzu eli-10 kuphela ukusuka kumbindi wedolophu. IWinchcombe yidolophu encinci yaseCotswold kufutshane neSudeley Castle. Kukho ukhetho olulungileyo lweevenkile, ii-pubs kunye neeresityu.
Ukuhamba okugqwesileyo kuwo onke amacala. Cheltenham Race Course yimizuzu eli-10 yokuqhuba.
Inja enye encinci / ephakathi yamkelekile ngexabiso elongezelelweyo le-£ 20. Nceda wongeze inja kwindawo yokubhukisha.
Iintsana (abangekakhasi) kunye nabantwana abangaphezu kwe-8 bamkelekile.
Izixhobo kwi-cottage ziquka:
Igumbi lokutyela, ikhitshi elidityanisiweyo elinazo zonke iimod cons, igumbi eliluncedo, igumbi lokuhlala elipholileyo elinesofa yekona kunye nomlilo ovulekileyo. Izitepsi eziya kwigumbi lokulala elinobukhulu obuphezulu kunye negumbi lokulala elilingana noKumkani. Ibhedi enkulu yenkosi inokuguqulwa ngokucwangciswa kwangaphambili kwiibhedi ezingamawele. Igumbi lokuhlambela elinebhafu kunye neshawari ngaphezulu. 400 imisonto yokubala ilinen yomqhaphu yaseYiputa kunye neetawuli.
Kukho i-intshi ye-46 ye-HD TV enentonga yomlilo ye-Amazon, kuquka i-BBC iPlayer, i-Prime Video, i-ITV, yonke i-4, i-My5, i-YouTube. Ngena kwiNetflix yakho, ngoku iTV kunye neDisney + nokunye.
46" HDTV ene-I-Amazon Prime Video
IWinchcombe inomgangatho omangalisayo ongaphelelwa lixesha ngayo, izindlu zamatye zaseCotswold zomelezwe zizakhiwo ezimnyama nezimhlophe ezinamaplanga, izitalato ezimxinwa ezisecaleni kunye nezindlu ezinomtsalane zenza umbindi wale dolophu intle, ngoku edume njengeziko labahambi.
Ibekwe ngaphezulu koMlambo i-Isbourne, iWinchcombe ngokungathandabuzekiyo ilitye elinqabileyo elifihliweyo kwisithsaba saseCotswold. Ukuzulazula ezantsi kweNqaba okanye kwiSitrato seVineyard kuya kukubonisa umqolo wezindlu ezithandekayo kunye nobuhle belali yaseCotswold. Omnye weyona migca ithandekayo yezindlu zangasese kweli lizwe yiDent's Terrace. Ezi zindlu ze-almshouses ezinemida yazo emihle kunye neegadi zingumsebenzi ka-Emma Dent (inqaba yaseSudeley - ngo-1850) owakha amakhonkco aqinileyo phakathi kwedolophu kunye nenqaba.
Kanye nombindi wedolophu, kufuneka ubone iindawo yiNqaba yaseSudeley kunye neminyaka eyi-1,000 yembali yasebukhosini kunye nezitiya ezimangalisayo nangaliphi na ixesha lonyaka; icawa elikhaya kwilaphu lesibingelelo elenziwe nguCatherine waseAragon kunye ne-40 grotesques (ezibunjwe ukuba zibukeke njengabalinganiswa bendawo ye-1460's) okanye enye yeedolophu ezikhangayo - iWinchcombe Pottery okanye iMyuziyam yaseFolk kunye nePolisa.
I-Winchcombe iluyolo kubakhenkethi, kunye noluhlu oluhle lweevenkile ezibandakanya i-deli emangalisayo, abathengisi bemveli, iimpahla ze-boutique, uyilo lwangaphakathi kunye neevenkile zakudala zokukhangela. Idolophu ikwanobutyebi beendawo zokushicilela zembali, ezinye zine-twist yanamhlanje, amagumbi eti aliqela kunye neegalari ukuya kuthi ga emva kwemini.
I-Winchcombe inesimo esithi 'Abahambi bamkelekile' kunye neendlela ezininzi ezithandekayo zeenyawo ezinezinto ezinomdla zokuzibona kwindlela. Ungandwendwela i-villa yaseRoma ekude, iBelas Knap Long Barrow - indawo yokungcwaba ye-Neolithic, kunye nokukhwela phezulu kwi-scarp yaseCotswold kwaye ufumane iimbono ezintle. I-Winchcombe ibamba umnyhadala wokuhamba wonyaka ngoMeyi obonelela ngeendlela ezahlukeneyo zokuhamba kunye nezikhokelo zasekhaya, i-orientering kunye neziganeko zangokuhlwa.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Winchcombe